‘देश बनाउन हामी आफै लाग्नुपर्छ’ — News of The World
संसार न्यूज संवाददाताबैशाख ११, २०७५
मनाङको चामेमा जन्मिएकी लक्ष्मी लामा गुरुङले २३ वर्ष भयो कोरियालाई कर्मथलो बनाउन थालेको । सामान्य तालिमका लागि सन् १९९५ मा कोरिया पुगेकी लक्ष्मीले कोरियालाई नै कर्मथलो बनाएर जीवनको दुईदशक बढी त्यतै व्यतित गरेकी छन् । कोरियामा व्यवसायसँगै विभिन्न सामाजिक संस्थामा आवद्ध रहेर सामाजिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै नै सक्रिय रहेकी छन् लक्ष्मी ।
काठमाडौंको सरस्वती क्याम्पसबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्रिर्ण गरेकी लक्ष्मी एनआरएनए कोरियाकी अध्यक्ष समेत हुन् । ‘नेपाल नेपालीले नै बनाउने हो, अरुले होइन’ भन्ने सोँच राखेकी लक्ष्मीले विदेशमा बसेपनि नेपालको माया मुटुभरी राखेर नेपालको समृद्धिमा हैंसे गर्न आफू सधै तयार रहेको बताउँछिन् । कोरियाबाट आर्जन गरेको सीप तथा पुँजीलाई नेपाल भित्र्याएर देशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पु¥याउन सदैव तत्पर रहेको बताउने लक्ष्मीसँग ऐक्यबद्धताले गरेको कुराकानी ः
एनआरएन कोरियाले अहिलेसम्म गरेका कामहरू के के हुन् ?
नेपाली कला संस्कृति तथा पर्यटनको प्रबद्र्धन, यहाँ कार्यरत नेपालीहरूका समस्या समाधान र नेपालमा लगानी भित्र्याउने लगायतका विभिन्न पहल गरेका छौँ । अब यसलाई व्यवस्थित र योजनावद्ध ढंगले अगाडी बढाउने गरेर विशेष योजना बनाएका छौँ । त्यसलाई मुर्तरुप दिनका लागि अन्तिम चरणको तयारीमा पुगेका छौँ । छिट्टै यसको प्रारूप सार्वजानिक गर्छौ ।
कोरियामा नेपालीको संख्या र कामको प्रकृति पनि बताइदिनुहुन्छ की ?
कोरियामा नेपालीहरूको संख्या झण्डै ४३ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । अधिकांश औद्योगिक, कृषि तथा सेवाको क्षेत्रमा कार्यरत रहेको पाएको छु ।
कोरियामा विशेषत इपिएसमार्फत पुगेका नेपालीहरूको समस्या के पाउनु भएको छ ?
प्राय कामको कठिनताको कारणले उत्पन्न हुने विभिन्न समस्या र दुर्घटना हुने क्रम उत्तिकै छ । त्यस्तै मानसिक समस्या र आत्महत्याका घटना पनि उत्तिकै बढेको छ, पछिल्लो समय । हामीले रोकथामका लागि दूतावाससँगको सहकार्यमा विभिन्न कार्यहरू गर्दै आईरहेका छौं ।
कोरियन नागरिकसँग बिहे गरेर जाने दिदीबहिनीको समस्या देखिएको छ भनिन्छ नी तपाईले कस्तो पाउनु भएको छ ?
पहिले यो समस्या धेरै ठूलो रुपमा रहेको थियो तर, अहिले त्यस्तो समस्या खासै देखिएको छैन् । अहिले नेपाल सरकारले पनि कोरियन नागरिकसँग विवाहको अनुमतिलाई कडाई गरेकोले पनि समस्या कम हुँदै गएकोे देखिन्छ ।
एनआरएनए कोरियालाई अगाडि बढाउने यहाँको योजना के के छन् ?
एनआरएनएलाई कोरियाका नेपालीहरूको साझा र भरपर्दो संस्थाको रूपमा अगाडी बढाउँदै लैजाने प्रमुख उद्देश्य हो । हामीले यहाँका समस्याहरू समाधानको लागि छुट्टै योजनासहित नेपालमा लगानी भित्र्याउन छुट्टै योजना बनाएर अगाडी बढाउन लागिपरेका छौं । अब छिट्टै नेपाल हाउसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न र कोरियामा नेपाली साँस्कृतिक केन्द्र निर्माण गर्ने तथा परोपकारी कोष निर्माण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
नेपाल फर्केर केही गर्ने योजना बनाउनु भएको छ की ?
तत्काल नै त्यस्तो कुनै योजना त छैन । तर हाम्रो शरीर यता भएपनि मन भने जन्मभूमिमा नै छ । हामी यहाँ बसेपनि नेपालकै लागि दिनरात सोचिरहेका हुन्छौँ । देश बाहिर हुँदा झन् देशको माया बढ्दो रहेछ । हामीले कोरियाबाट आर्जन गरेका सिप प्रविधि र केहि पुँजीलाई नेपालमा नै भित्र्याउनुपर्छ । अब राजनीतिक स्थायित्व हुने संकेत देखिएको छ । प्रवासमा रहेका सबै नेपालीहरूलाई देशको आर्थिक समृद्धिका लागि केही योगदान गर्न अपिल गर्छु । हामी सबैले मिलेर देश बनाउनुपर्छ । देश हामीले नै बनाउने हो । बिदेशीले बनाउने होइन । व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले सानो तिनो उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना पनि बनाएको छु ।